कोविड-19 : चीन किन सन्देहमा? - खबरम्यागजिन
Homeखबरकोविड-19 : चीन किन सन्देहमा?
भाइरसको रहस्यबारे चीनको पोल उदाङ्गो हुने अन्य तथ्यहरु पनि छन् । चिनी मानव अधिकारको निम्ति कार्य गरिरहेकी एक कार्यकर्ताले फरवरीदेखि अप्रेलसम्म दुई महिनाको अन्तरालमा चीनमा लगभग अस्सी लाख मोबाइल उपभोक्ताहरु गायब बनेको खुलासा गरेकी छिन्। यति थोरै समयमा यति बिघ्न उपभोक्ताहरु रातारात कता हराए ? प्रश्न उब्जिनै सक्छ। मृतकहरुको अन्तिम संस्कारलाई लिएर अस्पतालकर्मीहरुद्वारा जारी बयानले पनि सरकार विवादमा घेरिएको छ । आखिर यस्तो के छ जसको कारण चीनले मृतकहरुको आँकडाबारे झुट बोलिरहेको छ ?
यदि भविष्यले तेस्रो विश्वयुद्धलाई आमन्त्रण गर्छ भने युद्धको एउटा कारण कोभिड 19 पनि हुन सक्ने प्रबलतालाई नकार्न सकिँदैन।
विश्वलाई कोरोना भाइरस बाँडेर भाइरसको जन्मदाता चीन अहिले आफ्नो आर्थिक-सामरिक शक्ति विस्तार तर्फ अघि बढिसकेको छ। महामारीको अवसाद कालमा राष्ट्रले बेहोर्नु परेको नोक्सानीको भरपाई स्वरूप वर्तमानमा चीनले विश्वका विभिन्न देशहरूमा मेडिकल उपकरण सप्लाई गरेर अरबौं खरबौं बटुलिरहेको छ।
राष्ट्रपति शि जिनपिंग लगायत चाइनिज अधिकारीहरु राष्ट्रमा रोकिएको अर्थ व्यवस्थालाई रफ्तार दिन नयाँ रणनीति निर्माणमा व्यस्त भए पनि केही यस्ता प्रश्नहरु पछि छोडेको छ जसलाई चीनले सजिलैसँग पिछा छुटाउन भने सक्ने छैन।
के कोरोना भाइरस मानव निर्मित रासायनिक हतियार हो ? आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई परास्त गर्न के चीनले बायकेमिकल आतङ्की हमलाको सहारा लिएका हुन ? दुनियाँलाई बर्बाद गर्न कोभिड 19 चीनको सोची सम्झी साजिस हो त ? वैश्विक हुकुमत र महामहिमको तख्तामा विराजमान हुन चीनले के एउटा घातक भाइरसलाई जन्म दिएका हो ? चीनको इरादा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थ व्यवस्थाको कम्मर भाँच्नु थियो ? आदि – आदि अनेकौं प्रश्नहरु छन्, जसले कोरोना जस्तो घातक, ज्यानमारा भाइरसलाई रहस्यमय बनाइदिएको छ ।
कोभिड 19 केवल एउटा दुर्घटनाको परिणाम भन्ने जति नै दावी किन नगरुन् तर धोखेबाज चीनको नियतमाथि सजिलै विश्वास गर्न सकिँदैन ।
ठिक छ, दिमागको एक कुनाबाट हामी सोचौं कि यो प्राकृतिक जीव हुन्, जो चीनबाट दुर्घटनावंश फैलिन पुग्यो अनि एकबाट अर्कोमा सरुवा हुँदै पूरा विश्वमा फैलियो । तर, भाइरसको जिज्ञासाबारे कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न यति मात्र जवाब पर्याप्त हुँदैन किनकि भाइरसको सन्देहलाई लिएर चीनप्रति औंला तेर्साउने प्रसस्त कारणहरु छन् ।
घातक कोरोना भाइरसले चाँडै विश्वमा नरसंहार ल्याउन सक्ने सत्यताबारे वुहान अस्पतालका डाक्टरहरुले शुरु मै चिनी अधिकारीहरुलाई अवगत गराएका थिए तर चीनका सरकारी तन्त्रले डाक्टरहरुको आवाजलाई दबाउने प्रयत्न गरिरहे। बिमारीको सङ्कटपूर्ण स्थितिबारे सार्वजनिक गर्ने डाक्टरहरुलाई दण्डीत गरे, जेल हाले ।
चीनपछि कोरोनाको पहिलो भाइरस 13 जनवरी 2020 मा थाइल्यान्डमा देखा परेको थियो । देशबाट भाइरस बाहिरिएपछि प्रथमपटक 14 जनवरीको दिन चिनी अधिकारीहरुबिच एक गोपनीय टेलिफोनिक कन्फ्रेन्स सम्पन्न भएको थियो, कन्फ्रेन्सपछि भाइरस एकदेखि अर्कोमा सरेको स्पष्ट तथ्य नभएको अनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने आधिकारिक बयान जारी गरेका थिए ।
चीनले दावी गर्दै आइरहेको छ कि यस घातक भाइरस वुहान इस्टिच्युट अफ बायरोलजीबाट शोध अवधी भूल स्वरुप लिक भएको हो तर सोच्नु पर्ने कुरा के छ भने यदि चीनको दावी सहि हो भने किन चीन कै डाक्टरहरुले सरकारको विरोध गरिरहेका छन?
वुहान सेन्ट्रल अस्पतालको आपतकालीन विभागकी निर्देशक डाक्टर आई फेनले एक चाइनिज पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा यदि कोरोना भाइरसले वैश्विक स्तरमै तबाही ल्याउने ज्ञात भए जस्तै कठोर सजाय खप्नु परे पनि कुनै न कुनै माध्यमद्वारा जनमानस समक्ष सच्चाई ल्याउने थिए भनी बताएकी थिइन्, वर्तमानमा डाक्टर आई फेन निखोज बनेकी छिन् र उनी हराउनको पछि चिनी सरकारको हात रहेको छ भन्दा गलत हुने छैन ।
वुहान सेन्ट्रल अस्पताल कै अर्को डाक्टर लि बेन लियाङ्ग जसले भाइरसबारे सरकारलाई लाखेस् गरे बापत उनलाई जेलमा हालिएको थियो, भाइरसका कारण डाक्टर लि को जेल मै मृत्यु भएको आधिकारिक पुष्टि गरिए पनि चीन कै खुफिया विभागका एक अधिकारीले डाक्टर लि को मृत्यु भाइरसको कारण नभएर चिनी सेनाद्वारा हत्या गरिएको दावी गरेको छ ।
आज विश्वका एक सय पचासीवटा देश कोभिड 19 बाट प्रभावित बनेको छ त्यसमा पनि अमेरिका अनि युरोपियन युनियनभित्रको शक्तिशाली राष्ट्रहरु पूर्णरुपमा प्रभावित बनेका छन्। यस्तो भान हुन्छ मानौँ कुनै खास लक्ष्यद्वारा यी राष्ट्रहरुलाई तारो बनाइएको हो।
यस्तो लाग्नु पछिको एउटा कारण, जब कि केही घन्टाको दुरिमा पर्ने चीनको अन्य शहरहरुमा भाइरसको उति प्रभाव देखिएन न त चीनमा अधिक संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु नै भयो। यति मात्र होइन औषधि उपचारको क्षेत्रमा दुनियाँ कै उच्च कोटिको आधुनिक अनि सर्वश्रेष्ठ मानिने इटली, फ्रान्स र अमेरिकाले नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको भाइरसलाई चीनले कसरी यति चाँडै नियन्त्रणमा ल्यायो त?
भाइरसको रहस्यबारे चीनको पोल उदाङ्गो हुने अन्य तथ्यहरु पनि छन् । चिनी मानव अधिकारको निम्ति कार्य गरिरहेकी एक कार्यकर्ताले फरवरीदेखि अप्रेलसम्म दुई महिनाको अन्तरालमा चीनमा लगभग अस्सी लाख मोबाइल उपभोक्ताहरु गायब बनेको खुलासा गरेकी छिन्। यति थोरै समयमा यति बिघ्न उपभोक्ताहरु रातारात कता हराए ? प्रश्न उब्जिनै सक्छ।
मृतकहरुको अन्तिम संस्कारलाई लिएर अस्पतालकर्मीहरुद्वारा जारी बयानले पनि सरकार विवादमा घेरिएको छ । आखिर यस्तो के छ जसको कारण चीनले मृतकहरुको आँकडाबारे झुट बोलिरहेको छ ?
इतिहासले पनि प्रमाण गर्दछ कि साम्राज्यवादी चीनले समय समयमा शङ्कास्पद रहस्यहरुलाई आफ्नो कुट्नीतिको हिस्सा बनाएर राखेको छ । चीनभित्र यस्ता अनेकौं मानवविरोधी रहस्यहरु छन्, जसबाट आँधी दुनियाँ अन्जान छन् ।
विश्वको अन्य राष्ट्रहरु माझको घनिष्टता चीनलाई रुच्दैन । भिटो पावरको दुरुपयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ ।
वर्तमान भीषण कोरोना कालमा जहाँ विश्व नै जिन्दगी र मृत्युबिच झुलिरहेको छ, त्यहीँ चीन भने अहिले विस्तारवादी नीतिलाई अन्जाम दिँदै ‘साउथ चाइना सि’ मा आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाउनमा व्यस्त छ । वैश्विक महामारीबाट दुनियाँ हाहाकार हुँदा चीनको शक्ति विस्तार निति के यो मानव विरोधी क्रियाकलाप होइन र ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वंयलाई महामहिम घोषित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो हुकुमतको डङ्का पिट्नु विश्वका तमाम ठूलो राष्ट्रमाझ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आर्थिक रूपमा मजबुत अनि शक्तिशाली हतियारहरुले सम्पन्न यी राष्ट्रहरु एकले अर्कोमाथि प्रभुत्व कायम राख्न कुनै मौकालाई चुकाउन चाहँदैनन्। यस्तोमा चीनले गरेको प्रहारको जवाबमा अन्य राष्ट्रहरुले कस्तो कदम उठाउने हुन्? चासोको विषय छ।